Kedu ka oke aja na uzuzu si eme? | Netwọk Mgbasa Ozi
na ájá na ájá oké ifufe Ha bụ ihe ịtụnanya dị egwu, dịkwa egwu ma ọ bụrụ na ha kụrụ gị ihe. Ha nwere ike belata nhụta nke obodo niile na ihe nkeji, ha na-ewe ogologo oge iji pụọ.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịma etu esi emepụta ha, elela anya gị site na nyocha ahụ ka anyị ga-akọwa ya n’ụzọ zuru ezu gịnị ka ha bụ na gịnị kpatara oké ifufe ndị a pụrụ iche.
Oké ifufe nke ájá na ájá adịghị amasị anyị, n'ihi na site na mbenata visibiliti, ha na-ebute oke ihe egwu n'okporo ụzọ. Otú ọ dị, daalụ, a pụrụ ịzụlite oke ọhịa dịka ndị nke Amazon, ya mere, ha nwekwara akụkụ dị mma.
Dika oke ikuku adighi dika uzuzu uzuzu, anyi ga ahu ha iche:
1 Oke ikuku
2 Oké ifufe
3 Olee otú ha si kpụrụ?
4 Kedu otu esi echebe onwe gị pụọ na oke aja ma ọ bụ oke ikuku?
4.1 N'ime ụgbọ ala
4.2 Na-eje ije
Ihe mejuputara aja eji eme aja bu aja site na ebe udiri ala nke na ano n’elu ya. Mgbe ọsọ na ike nke ifufe na-abawanye, a na-agbatị ihe ndị a n'elu, enwe ike ịga njem dị anya ogologo.
Ala ebe emeputara ha bu nke enweghi ahihia ahihia ụfọdụ, eziokwu nke na-amasị ahụ ndị a na-ebuli elu. Dịka ọmụmaatụ, n'ọzara Sahara ma ọ bụ na mbara ala nke North America, ha dị ọtụtụ.
Ihe kachasị dị iche iche nke ụdị ifufe a na nke ájá bụ mmụba nke ihe ndị dị na nkwusioru. N'okwu a, ha erughị 100 microns, ya bụ, 0'01000000cm, akparamagwa nke na-enye ha ohere ịba ụba, ma nwee ike ime ka anyị chee na e metọrọ gburugburu anyị. Na mgbakwunye, n'ihi njirimara ha, ha na-egbochi igwe ojii, ka mmiri ozuzo na mpaghara ebe ha hiwere dị ụkọ.
Ebe a kacha emepụta ha bụ ọzara Sahara, ebe ikuku ikuku na-ahụ maka uzuzu ruru mba anyị, ọkachasị n'oge ọkọchị.
Olee otú ha si kpụrụ?
Maka nhazi nke ụdị phenomena ọ dị mkpa na enwere iche thermal n’agbata ala na etiti na elu nke ikuku. Ka elu ụwa dị ọkụ karị, igwe ikuku na uzuzu nke ha na-ebu na ya, nwere ike iru ọkwa dị elu nke troposphere. Mana ihe anaghị akwụsị ebe ahụ, ebe ọ bụ na ha chọrọ ikuku a ka o daba na ihe oyi karịa ka o wee bulie elu karịa; na Nke ahụ bụ ihe ikuku oyi si na mbara igwe dị elu ga-elekọta..
Ya mere, a ghaghi inwe usoro ihu na mpaghara nke nwere ihu igwe na-ekpo oku ma kpoo. Usoro ikuku dị n'ihu, nke dị oyi, na-ewepu ikuku na-ekpo ọkụ n'ime ụlọ ahụ, na-eme ka gradient nrụgide na-abawanye. N'ụzọ dị otu a, ikuku ikuku na-arịwanye elu, na-etinye onwe ya n'etiti 80 na 160km / awa, na-akpata ọgba aghara. Igwe ihu igwe, na-ekpo ọkụ nke ukwuu, na-ebute okwute ntụgharị.
The ahụ nwere ike si otú ahụ nọgide na-kwụsịtụrụ na ikuku ogologo oge.
Kedu otu esi echebe onwe gị pụọ na oke aja ma ọ bụ oke ikuku?
Beingbụ phenomena nke na-ebelata ọhụụ, anyị ga-akpachara anya ma ọ bụrụ na anyị enweta a. Ma ì bi n’ógbè ebe ha bụ ndị ọhaneze ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ha na-eme oge ụfọdụ, ọ dị mkpa ịmata etu ị ga-esi mee ihe ka i wee nwee ike ịpụ na ya n’enweghị nsogbu.
N'ime ụgbọ ala
Ọ bụrụ na ị na-akwọ ụgbọala ma na mberede hụ aja ájá ma ọ bụ ájá na-abịakwute gị, ị nwere ike ime ihe abụọ:
Gaa na yaọ bụrụhaala na ịnwere ike iru ọsọ ọsọ enyere ka etinyeghị onye ọ bụla nsogbu.
Kwụsị n'akụkụ ma chere. Ọ bụ nhọrọ a kacha atụ aro, kamakwa nke na-akacha ewute gị, ebe ọ bụ na n'oge na-adịghị anya ị ga-ahụ onwe gị ka etinyere na ájá, ị gaghị ahụ ihe ọ bụla maka nkeji ole na ole. Iji jide n'aka na ọ nweghị ihe ga - eme gị, tinye n'ubu (ma ọ bụ ka mma, pụọ n'okporo ụzọ ma ọ bụrụ na ị nwere ike), ma mechie windo.
Ọ bụrụ na ájá ma ọ bụ oké ifufe mmiri dakwasị gị mgbe ị na-eje ije, ihe mbụ ị ga-eme bụ itinye nkpuchi imi na ọnụ gị. Ọ bụrụ na inwere ya, tinye mmanu mmanu mmanu mmanu imi gi ka gbochie ha ihicha.
Ozugbo ịmechara, ị ga-echedo anya gị. Iji mee nke a, ị nwere ike ichebe ihu na otu ogwe aka, ma ọ bụ na-eyi ugegbe ikuku. I kwesiri ima na anya nkịtị anaghị echebe oke oke megide ahụ; ka mma iji airtight.
Ugbu a, ị ga-achọ ebe mgbaba. Ihe kachasị atụ aro bụ banye na mpaghara lee lee (ya bụ, ọ na-echedo onwe ya ihu na ntụ nke ikuku na-abịa), dịka n’azụ osisi ogologo ma ọ bụ nkwụ; na mgbe ọ bụla i nwere ike, nọrọ n’ebe di elu.
N'ikpeazụ, chebe onwe gị pụọ na ihe dị arọ nke nwere ike ịpụ apụ. Nyere onwe gị aka n'akpa akpa gị, ma ọ bụ rute nso n'ala dịka ị nwere ike.
Aja na aja ikuku nwere ike ibute otutu nsogbu, ya mere ka mma dọọ aka ná ntị. Lezienụ anya na ịdọ aka ná ntị ihu igwe na obodo gị ka a ghara ijide gị na nzuzo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Kedu ka oke aja na uzuzu si eme?
See hụrụ, amaghị m ma ha achọpụta; ma ọ bụrụ na enwere ike ịgụ nke a na ibe ma ọ bụ; kama, nchịkọta akụkọ / s nke m na-atụ aro ka ị mee otú ahụ, ebe ọ bụ na ihe e kwuru na akwụkwọ a bụ nkwenye dị ka katidral ma soro ya na nkọwa nke m chere; na ijide ezi ihe nke ibe ahụ n'onwe ya; Ọ bụrụ na ezubere ya ịbụ nke siri ike na dịka ebumnobi na nkwenye dị ka o kwere yana akwụkwọ ya, ana m atụ aro ka ndị editọ / ndị editọ leba anya n'ihe ndị a:
N’akwụkwọ a ka ekwuru na isi ihe dị iche n’etiti oke ikuku na oke ikuku bụ ihe dị iche na nsogbu dị iche iche ma ọ bụ ihe mejupụtara ma ọ bụ bụ ihe kpatara oke mmiri ozuzo a kwuru; a bịa n’oké ifufe, a na-ekwu na ọ bụ ájá ka e ji me ya; N'adịghị ka ndị ájá, nke, dị ka aha ha na-egosi, na-agbagha site n'ọgba aghara ma ọ bụ site na ọgba aghara nke ihu igwe nke ọdịdị ikuku na-akpata site na nchupu nke igwe ikuku, nke na-eme ka ịrịgo nke ọka ájá na usoro niile. Ma nsogbu bụ na mgbe ma ọ bụ mgbe e nyere data gbasara akụkụ nke granulu ájá nke na-akpata oké ifufe, a na-enye ntụpọ akụkụ; na-egosi ma na-ekwenye na ederede / na akwụkwọ ahụ na nghọta doro anya zuru oke, »nkịtị»: na uzuzu uzuzu oscillate ma ọ bụ nwee obere pekarịrị 100 microns; ma ọ bụ ihe bụ otu ihe ahụ, 100 µm micrometers; edere ya na leta “mu” dika nganiihu nke usoro mba uwa nke nkeji; na-egosi na ọ bụ ihe na-erughị 0,1mm ma ọ bụ> 0,1mm; onye ihe ya ruru 0,0001cm ma obughi 0,01000000cm dika egosiri na ibe ahu ma edokwara ya na obu otu. Nke pụtara nhiehie nke akụkụ stratospheric maka edemede nke na-eme ka ọ bụ sayensị. Na ihe ka njọ. A na-esonyere ya na ngalaba 7 dị oke mkpa iji nye ya nnukwu mgbatị; mgbe ihe niile ọ na-eme bụ ime ka ọnọdụ ma ọ bụ nkwupụta a gosipụtara na akwụkwọ ahụ ka njọ.
Zaghachi Adrián Rodríguez Areal
Kedu mgbe ụmụ mmadụ malitere ịmalite ihu igwe?